बढ्यो मृ,त्युदर ! दुई चरणकै खोप लगाएकी कार्यपालिका सदस्यको दुखद मृ,त्यु -
बढ्यो मृ,त्युदर ! दुई चरणकै खोप लगाएकी कार्यपालिका सदस्यको दुखद मृ,त्यु
२१ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मंगलबार एकै दिन ५५ जनाको मृ,त्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार दिउँसो सार्वजनिक गरेको पछिल्लो २४ घण्टाको विवरणमा मृ,त्यु हुनेको संख्या ५५ उल्लेख गरिएको छ । यो सोमबार मृ,त्यु हुनेको संख्या भन्दा १८ जना बढी हो । यसअघि सोमबार ३७ जना र आइतबार २७ जनाको मृ,त्यु भएको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ ।
Previous कोरोनाबाट एकै दिन ५५ जनाको मृ,त्यु,बढे संक्रमित
Next लगडाउनको बेला चक्र बम र अन्जु भेटिए यस्तो रोमान्स गर्दै(भिडियो)